भर्चुअल शैक्षिक परामर्शको आकर्षणः ५५ हजार भिजिटर
शिलापत्र संवाददाता काठमाडाैं, २४ भदाै
भर्चुअल शैक्षिक परामर्शमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । ‘नेपालमा पहिलो पटक डिजिटल पत्रिका शिलापत्रले आयोजना गरेकोे भर्चुअल परामर्शमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ,’ मेलाका संयोजक सुरेश सिम्खडाले भने, दिन प्रतिदिन नेपाल एडुफेयरडटकम भिजिट गर्नेको संख्या बढ्दो छ ।’
उनका अनुसार अहिलेसम्म ५५ हजारभन्दा बढीले भिजिट गरेका छन् । विद्यार्थीले भर्चुअल मेलाबाट कलेज र विषयबारे परामर्श लिन सक्नेछन् । ‘घरै बसीबसी चाहेको शैक्षिक संस्थाको लबी, ल्याब, लाइब्रेरी, कक्षाकोठा, हलदेखि सबै संरचना र सुविधाका विषयमा बुझ्न सकिन्छ,’ संयोजक सिम्खडाले भने ।
भर्चुअल मेला भ्रमण गर्नेका लागि छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरिएको छ । ‘शिलापत्र उज्ज्वल स्कलरसिप’ अन्तर्गत ८ विद्यार्थीका लागि ५० लाखबराबरको छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । छात्रवृत्तिका लागि २ हजार ५ सय विद्यार्थीले फाराम भरेका छन् ।
स्कलरसिपका लागि मंगलबार विद्यार्थीले दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा दिएका छन् । यसअघि गत शुक्रबार पहिलो चरणको लिखित परीक्षा दिएका थिए ।
‘शिलापत्र उज्ज्वल छात्रवृत्तिका लागि २ हजारभन्दा बढीले फम भरेका छन्, त्यसैले लिखित परीक्षा चरण चरणमा गरेका हौं,’ संयोजक सिम्खडाले भने, ‘अर्को चरणको लिखित परीक्षा आगामी मंगलबार बिहान ८ बजे हुनेछ । ’ परीक्षा केन्द्र भने आयोजकले फाराम भरेका विद्यार्थीलाई जनाकारी गारउनेछ ।
यसलगत्तै ३० प्रतिशत कलेजको अन्तरवार्ता र २० प्रतिशत एसईई र प्लस टुको ग्रेडलाई पनि मापन गरिनेछ । जसले सबैभन्दा बढी अंक ल्याउँछ, तीमध्येका ८ जनाले छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।
शंकरदेव कलेजको बीबीए, राजधानी मोडेल कलेजको बीएचएम, टेक्सास कलेजको बीआईटी, मेधावी कलेजको बीसीआईएस, ग्लोबल इन्टरनेसनल कलेजको बीटीटीएम, नेपाल मेगा कलेजको बीबीएम, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टको बीबीएस, के एन्ड के कलेजको बीएसडब्लूूमा स्कलरसिपको व्यवस्था गरिएको छ ।
भर्चुअल शैक्षिक परामर्शप्रति विद्यार्थी उत्साहित भएका छन् । ‘नेपाल एडुफेयरले धेरै अवसर दिएको छ,’ उज्ज्वल स्कलरसिप परीक्षामा सहभागी आशिष महर्जनले भने, ‘स्कलरसिपमा पढ्न पाउनु राम्रो हो ।’ उनले भर्चुअल शैक्षिक परामर्श फेसबुकबाट थाहा पाएका हुन् । ‘परीक्षा राम्रो भएको छ,’ परीक्षामा सहभागी सुजाता कार्की भन्छिन्, ‘एडुफेयरले विद्यार्थीलाई कलेज र विषयबारे राम्रो जानकारी दिएको छ ।’
कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नलाई समेटेर कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ‘प्लस टु पछिको गन्तव्य’ स्तम्भ पनि सुरु गरेको हो । भर्चुअल मेलामा मिटिङ प्वाइन्टको व्यवस्थापन र नयाँ पत्रिकाको सहकार्य रहेको छ ।
विद्यार्थीको अभिभावकः नेपाल एडुफेयर
५० लाख राशीको ’शिलापत्र उज्ज्वल स्कलरसिप’ घोषणा
विद्यार्थीको सारथीःभर्चुअल शैक्षिक मेला
कसले पाउला ५० लाख ‘शिलापत्र उज्ज्वल स्कलरसिप’ ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २५, २०७६, ०४:२०:००
भिल्लारियलमाथिकाे जितले बार्सिलाेनाकाे उपाधि आशा कायमै
प्रविधिको दुरुपयोग बढेकोमा चिन्ता